တက်ခြေနင်းအဖြစ် Logitech G27 ခြေနင်း
မေးခွန်း တက်ခြေနင်းအဖြစ် Logitech G27 ခြေနင်း
3 နှစ်ပေါင်း2days ago -3တစ်ရက်လွန်ခဲ့တဲ့ 1 နှစ်ပေါင်း #496 by JanneAir15
ဟယ်လို! တက်ခြေနင်းအဖြစ် Logitech G27 ခြေနင်းကိုအသုံးဖို့ကဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ငါပြီးသားကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုရှာဖွေခဲ့ကြပေမယ့်လည်းဒီကနေမေးရန်လိုပါသည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသင်ဤနေရာတွင်ပြောပြကျေးဇူးပြုပြီးအလုပ်လုပ်ရပုံကိုသိကြပါလျှင်။
တော့ဘူးဖြေဆိုရန်မလိုအပ်ပါ! ငါသည်ငါ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါတယ်။ ငါ Joystick, ခြေနင်းများနှင့်အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာကိုဝယ်ယူသွားတာပါ။ ဒါကသိပ်ရှုပ်ထွေးခဲ့တဲ့ငါသည်ဤအမှုအရာများဝယ်ယူသူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့ပိုပြီးလက်တွေ့ကျကြောင်းသဘောပေါက်လာတယ်။
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်:3နှစ်ပေါင်း 1 တစ်ရက်လွန်ခဲ့တဲ့အားဖြင့် JanneAir15.